Cabdi Xaashi oo hal sabab uga horyimid magacaabida guddiyada doorashooyinka | Warkii.com
Home warkii Cabdi Xaashi oo hal sabab uga horyimid magacaabida guddiyada doorashooyinka
Guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, Mudane Cabdi Xaashi Cabdullahi ayaa maanta ka horyimid guddiyada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka ee uu ku dhowaaqay ra’iisul wasaaraha Somalia.
Warqad ka soo baxday xafiiska Cabdi Xaashi ayaa waxa uu ku shaaciyey sababta ku diiday dhismaha guddiyadaasi, isaga oo sheegay in laga tegay xubno uu u gudbiyey ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, si loogu daro xubnaha guddiyada doorashooyinka.
Xubnahaas oo afar ka koobnaa ayuu sheegay inay ahaayeen guddigii Somaliland ku matali lahaa doorashadda, hayeeshee uu ka tegay ra’iisul wasaaraha.
Sidoo kale wuxuu tilmaamay in xubnaha guddiyada lagu dhowaaqay aysan metali karin Somaliland ama gobollada waqooyi, sida uu hadalka u dhigay.
Cabdi Xaashi ayaa qoraalkan ogeysiiyey madaxweynaha, ras’iisul wasaaraha iyo dhammaan madaxda dowlad goboleedyada ka jira dalka.
Si kastaba arrintan ayaa ku soo aadeysa, iyada oo haatan khilaaf adag uu ka taagan yahay sida loo wajahayo doorashada xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee ka imaanaya dhanka gobollada waqooyi ee dowladda federaalka ku metalayo maamulka Somaliland.
Previous articleGalmudug oo howl-gal culus qaaday, kadib weerarkii lala beegsaday Qoor Qoor
Next articleJames Swan iyo Biixi oo ka wadahadlay soo celinta
Wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in saaka ciidamada dowlad goboleedka Galmudug iyo kuwa Xoogga dalka Soomaaliyeed ay u dhaqaaqeen deegaano ku yaal...
Wasiirka Warfaafinta DF oo si yaab leh ugu jawaabay dalabkii Faysal...